၂၉.၁၀.၂၀၂၀ – နောကျဆုံးရ လီဗာပူးလျသတငျးမြား စုစညျးမှု – Sports A2Z
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ – နောကျဆုံးရ လီဗာပူးလျသတငျးမြား စုစညျးမှု
ကာရဂေါက ခံစဈဒဏျရာပွဿနာမြားနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ သူ့ကို ပွနျချေါဖို့ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး အခှငျ့အရေးရှိနကွေောငျး နောကျပွောငျမှုပွုလုပျခဲ့သလို အသငျးက ထှကျခှာသှားခဲ့တဲ့ နောကျခံလူ လိုဗရနျရဲ့ နရောကို အစားထိုးမှု မပွုလုပျခဲ့တာ အသငျးရဲ့အမှားဖွဈကွောငျး ထောကျပွခဲ့။
မဈဂြီလနျးနဲ့ပှဲမှာ ကွမျးတမျးစှာဖကျြထုတျကစားခံနရေလို့ လူစားလဲခဲ့ရတဲ့ ဟနျဒါဆနျဟာ လာမယျ့ ဝကျဈဟမျးအသငျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဥျအတှကျ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝနကွေောငျး လီဗာပူးလျနညျးပွ ကလော့ပျအတညျပွု။
မိုဆာလားကို တဈကိုယျကောငျးဆနျတဲ့ ကစားသမားလို့ ထငျမွငျခဲ့မိပမေယျ့ သူဟာ လကျရှိရာသီ ကစားနပေုံအရ မယုံကွညျနိုငျစရာကောငျးလောကျအောငျ နောကျတဆငျ့ကို ရောကျရှိသှားတဲ့ ကစားသမားကောငျးတဦးအဖွဈ အသငျးနဲ့တှဲဖကျကစားနကွေောငျး ပီတာခရော့ချြ ခြီးကြူး။
မီဈဂြီလနျးအသငျးနဲ့ပှဲမှာ ဖာဘငျညိုနရော လူစားဝငျကစားပွီး ဗဟိုခံစဈနရောမှာ ခွစှေမျးပွသသှားခဲ့တဲ့ ရီးဈဝီလီယမျဈဟာ ကမ်ဘာအဆငျ့ ခွစှေမျးမြိုးကို ထုတျဖျောပွသခဲ့ကွောငျး လီဗာပူးလျအသငျးဖျော အလကျဇနျဒါး အာနိုးက ခြီးကြူးသှားခဲ့သလို သူ့ရဲ့ နညျးပွဟောငျးကလညျး ရီးဈဟာ ဗနျဒိုကျလကျသဈဖွဈ​တယျလို့ တငျစားခဲ့။
မဈဂြီလနျးနဲ့ပှဲမှာ အိုရီဂီရဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးနဲ့ စှမျးဆောငျရညျ သိပျကောငျးခဲ့ကွောငျး ခြီးကြူးခဲ့တဲ့ နညျးပွ ကလော့ပျရဲ့မှတျခကျြကွောငျ့ လီဗာပူးလျပရိသတျတှေ အံ့အားသငျ့ခဲ့ရပွီး သူဟာ တကွိမျမှ ဂိုးပေါကျတညျ့မှု မရှိခဲ့သလို ဘောလုံးပေးပို့မှု ၁၂ ကွိမျသာ ပွုလုပျနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရ။
လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး ကုနျဆုံးတော့မယျ့ ဗဟိုခံစဈမှူး ဒေးဗဈ အလာဘာကို နှရောသီမှာ ပွောငျးရှကွေ့ေးအလှတျနဲ့. ချေါယူပွီး အသငျးခံစဈကွောငျးကို ဖွညျ့တငျးသှားဖို့ စီစဥျနကွေောငျး သိရ။
လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ ဂိုး ၁၀၀၀၀ ပွညျ့မွောကျခဲ့တဲ့ သမိုငျးဝငျဂိုးကို သှငျးယူခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး ဒီယိုဂို ဂြိုတာကို အသငျးရဲ့ ပရိသတျတှကေ တှဈတာကနတဆ​ငျ့ မွောကျမွားစှာသော ဂုဏျပွုမှုမြား ပွုလုပျနပွေီး သူ့ကို ခဈြခငျမှုမြား ပွ​သနကွေ။
ကာရေဂါက ခံစစ်ဒဏ်ရာပြဿနာများနေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ သူ့ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွင့်အရေးရှိနေကြောင်း နောက်ပြောင်မှုပြုလုပ်ခဲ့သလို အသင်းက ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ လိုဗရန်ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးမှု မပြုလုပ်ခဲ့တာ အသင်းရဲ့အမှားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့။
မစ်ဂျီလန်းနဲ့ပွဲမှာ ကြမ်းတမ်းစွာဖျက်ထုတ်ကစားခံနေရလို့ လူစားလဲခဲ့ရတဲ့ ဟန်ဒါဆန်ဟာ လာမယ့် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက် ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေကြောင်း လီဗာပူးလ်နည်းပြ ကလော့ပ်အတည်ပြု။
မိုဆာလားကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ကစားသမားလို့ ထင်မြင်ခဲ့မိပေမယ့် သူဟာ လက်ရှိရာသီ ကစားနေပုံအရ မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် နောက်တဆင့်ကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ ကစားသမားကောင်းတဦးအဖြစ် အသင်းနဲ့တွဲဖက်ကစားနေကြောင်း ပီတာခရော့ခ်ျ ချီးကျူး။
မီစ်ဂျီလန်းအသင်းနဲ့ပွဲမှာ ဖာဘင်ညိုနေရာ လူစားဝင်ကစားပြီး ဗဟိုခံစစ်နေရာမှာ ခြေစွမ်းပြသသွားခဲ့တဲ့ ရီးစ်ဝီလီယမ်စ်ဟာ ကမ္ဘာအဆင့် ခြေစွမ်းမျိုးကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း လီဗာပူးလ်အသင်းဖော် အလက်ဇန်ဒါး အာနိုးက ချီးကျူးသွားခဲ့သလို သူ့ရဲ့ နည်းပြဟောင်းကလည်း ရီးစ်ဟာ ဗန်ဒိုက်လက်သစ်ဖြစ်​တယ်လို့ တင်စားခဲ့။
မစ်ဂျီလန်းနဲ့ပွဲမှာ အိုရီဂီရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် သိပ်ကောင်းခဲ့ကြောင်း ချီးကျူးခဲ့တဲ့ နည်းပြ ကလော့ပ်ရဲ့မှတ်ချက်ကြောင့် လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်ခဲ့ရပြီး သူဟာ တကြိမ်မှ ဂိုးပေါက်တည့်မှု မရှိခဲ့သလို ဘောလုံးပေးပို့မှု ၁၂ ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရ။
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မယ့် ဗဟိုခံစစ်မှူး ဒေးဗစ် အလာဘာကို နွရောသီမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအလွတ်နဲ့. ခေါ်ယူပြီး အသင်းခံစစ်ကြောင်းကို ဖြည့်တင်းသွားဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း သိရ။
လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ဂိုး ၁၀၀၀၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဒီယိုဂို ဂျိုတာကို အသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေက တွစ်တာကနတဆ​င့် မြောက်မြားစွာသော ဂုဏ်ပြုမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး သူ့ကို ချစ်ခင်မှုများ ပြ​သနေကြ။
၂၉.၁၀.၂၀၂၀ – နောကျဆုံးရ ခယျြလျဆီးသတငျးမြား စုစညျးမှု
၂၉.၁၀.၂၀၂၀၊ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။